ရန်ကုန်နှင့် မြို့ကြီး ၉ မြို့က ကညနရုံးတွေမှာ မော်တော်ယာဉ်ကို Test Lane နဲ့စစ်ဆေးမယ်
14 Nov 2017 . 4:46 PM
ရန်ကုန် အပါအဝင် မြို့ကြီး ၉ မြို့က ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ကညန) ရုံးတွေ မှာ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA)ရဲ့အကူအညီနဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကနဦးစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ သက်တမ်းတိုးစစ်ဆေးတာတွေကို ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးပြုတဲ့ Test Lane စက်နဲ့ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီလိုစစ်ဆေးတာကို ရန်ကုန်က မြင်သာကညနရုံးမှာ ဦးဆုံးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်စစ်ဆေးပေးနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ယာဉ်တွေကို စက်စနစ်နဲ့စစ်ဆေးဖို့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရတာက ယာဉ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အိတ်ဇောကထွက်တဲ့အငွေ့မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေဘယ်လောက်ပါနေသလဲဆိုတာကိုပါ စစ်ဆေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်က မြင်သာကညနရုံးမှာ စက်တပ်ဆင်ပြီးသွားရင် ထောက်ကြန့်၊ ပဲခူး၊ မော်လမြိုင်၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ပုသိမ်၊ တောင်ကြီး၊မုံရွာမြို့တွေက ရုံးတွေမှာ စက်တွေ ဆက်လက်တပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်တာနဲ့ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေ Inspection Center တွေတည်ထောင်ပြီး Multi Test Lane နဲ့ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက် စည်းမျဉ်းတွေရေးဆွဲထားပြီး အတည်ပြုချက်ရရှိမယ်ဆိုရင် တာဝန်တွေကိုပုဂ္ဂလိကဘက်ကနေ ခွဲဝေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ယာဉ်စစ်ဆေးတာကို မျက်မြင်အနေအထားနဲ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီး စက်တွေ တပ်ဆင်ပြီးလို့ Test Lane နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာ ယာဉ်စစ်ဆေးနိုင်မှုအရေအတွက်ကိုတိုးပြီး စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရနျကုနျနှငျ့ မွို့ကွီး ၉ မွို့က ကညနရုံးတှမှောမျောတျောယာဉျကို Test Lane နဲ့စဈဆေးမယျ
ရနျကုနျ အပါအဝငျ မွို့ကွီး ၉ မွို့က ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန(ကညန) ရုံးတှေ မှာ မျောတျောယာဉျတှကေို ဂပြနျအပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးအဂေငျြစီ (JICA)ရဲ့အကူအညီနဲ့ မျောတျောယာဉျကနဦးစဈဆေးတာတှနေဲ့ သကျတမျးတိုးစဈဆေးတာတှကေို ကှနျပြူတာစနဈအသုံးပွုတဲ့ Test Lane စကျနဲ့ စဈဆေးသှားမယျလို့သိရပါတယျ။
ဒီလိုစဈဆေးတာကို ရနျကုနျက မွငျသာကညနရုံးမှာ ဦးဆုံးဆောငျရှကျမှာဖွဈပွီး လာမယျ့ဒီဇငျဘာမှာ စတငျစဈဆေးပေးနိုငျမယျလို့သိရပါတယျ။ ယာဉျတှကေို စကျစနဈနဲ့စဈဆေးဖို့ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရတာက ယာဉျနဲ့ပတျသတျတဲ့အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို သိရှိနိုငျဖို့အတှကျဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လထေုညဈညမျးမှုကို ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ အိတျဇောကထှကျတဲ့အငှမှေ့ာ သဘာဝပတျဝနျးကငျြအတှကျ ဆိုးကြိုးတှဘေယျလောကျပါနသေလဲဆိုတာကိုပါ စဈဆေးနိုငျမယျလို့ဆိုပါတယျ။
ရနျကုနျက မွငျသာကညနရုံးမှာ စကျတပျဆငျပွီးသှားရငျ ထောကျကွနျ့၊ ပဲခူး၊ မျောလမွိုငျ၊ မန်တလေး၊ မကှေး၊ ပုသိမျ၊ တောငျကွီး၊မုံရှာမွို့တှကေ ရုံးတှမှော စကျတှေ ဆကျလကျတပျဆငျသှားမှာဖွဈပွီး စဈဆေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကုနျလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနကလုပျဆောငျနတေဲ့ ယာဉျမှတျပုံတငျတာနဲ့ယာဉျစဈဆေးခွငျးလုပျငနျးတှကေို ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍကနေ Inspection Center တှတေညျထောငျပွီး Multi Test Lane နဲ့ စဈဆေးဆောငျရှကျခှငျ့ပွုဖို့အတှကျ စညျးမဉျြးတှရေေးဆှဲထားပွီး အတညျပွုခကျြရရှိမယျဆိုရငျ တာဝနျတှကေိုပုဂ်ဂလိကဘကျကနေ ခှဲဝဆေောငျရှကျသှားဖို့ရှိတယျလို့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ယာဉျစဈဆေးတာကို မကျြမွငျအနအေထားနဲ့စဈဆေးနတောဖွဈပွီး စကျတှေ တပျဆငျပွီးလို့ Test Lane နဲ့စဈမယျဆိုရငျ တဈနတေ့ာ ယာဉျစဈဆေးနိုငျမှုအရအေတှကျကိုတိုးပွီး စဈဆေးနိုငျမှာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
by yoelu . 13 hours ago